နယ်သာလန် ထိပ်သီးနှစ်သင်း နိုင်ပွဲရယူခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် Play off ပွဲစဉ်များ
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ အခြေအနေကောင်းသွားတဲ့ PSV နဲ့ အေဂျက်စ်
23 Aug 2018 . 10:46 AM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ Play Off အဆင့် ပထမအကျော့ပွဲတွေ အပြီးမှာတော့ နယ်သာလန် ထိပ်သီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ PSV နဲ့ အေဂျက်စ်အသင်းတို့ ခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ နီးစပ်သွားပါပြီ။ PSV အသင်းဟာ ဘီလာရုစ်ကလပ် BATE အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ အကြိတ်အနယ်ကစားပြီးမှ တိုက်စစ်မှူး မာလန် Malen ရဲ့ နောက်ကျဂိုးကြောင့် (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PSV အသင်းအနေနဲ့ အဝေးကွင်းမှာ နိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့အပြင် ဂိုးတွေလည်း သွင်းယူခဲ့လို့ ဒုတိယအကျော့ကျရင် သရေ ဒါမှမဟုတ် (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင်တောင် ခြေစစ်ပွဲ အောင်ပါပြီ။
အေဂျက်စ်အသင်းကလည်း ယူကရိန်းထိပ်သီး ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အေဂျက်စ်အသင်းအတွက် ဂိုးတွေကို Van de Beek ၊ Ziyech ၊ Tadić တို့က သွင်းယူခဲ့ပြီး ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းရဲ့ ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက် ပါးပါးလေးအတွက် Kędziora က အဝေးဂိုး သွင်းယူခဲ့တာပါ။ ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းဟာ ခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ဆိုရင် အိမ်ကွင်းမှာ (၂)ဂိုးနဲ့အထက် သွင်းရမှာဖြစ်သလို ဂိုးမပေးရအောင်လည်း ဂရုစိုက်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာ AEK အေသင်အသင်း အဝေးကွင်းမှာ နိုင်ပွဲရယူခဲ့ပြီး ဘင်ဖီကာ၊ ဆာလ်ဘာ့ဂ်၊ ဒိုင်နမိုဇာဂရက် အသင်းတို့ကတော့ သရေရလဒ်သာ ရရှိခဲ့တယ်။ ချန်ပီယံလိဂ် Play Off ခြေစစ်ပွဲ ဒုတိယအကျော့ကို သြဂုတ်(၂၈၊ ၂၉)ရက်တွေမှာ ဆက်ကစားကြမှာဖြစ်လို့ ဘယ်သူတွေ နောက်တစ်ဆင့်တက်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
ချန်ပီယံလိဂ် Play Off ခြေစစ်ပွဲ ရလဒ်များ
Crvena Zvezda0–0Salzburg
BATE2–3PSV
Young Boys 1 – 1 Dinamo Zagreb
Vidi 1 –2AEK Athens
Ajax3– 1 Dynamo Kyiv
ခနျြပီယံလိဂျမှာ ခွစေဈပှဲအောငျမွငျဖို့ အခွအေနကေောငျးသှားတဲ့ PSV နဲ့ အဂေကျြဈ
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျခွစေဈပှဲ Play Off အဆငျ့ ပထမအကြော့ပှဲတှေ အပွီးမှာတော့ နယျသာလနျ ထိပျသီးနှဈသငျးဖွဈတဲ့ PSV နဲ့ အဂေကျြဈအသငျးတို့ ခွစေဈပှဲအောငျဖို့ နီးစပျသှားပါပွီ။ PSV အသငျးဟာ ဘီလာရုဈကလပျ BATE အသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ အကွိတျအနယျကစားပွီးမှ တိုကျစဈမှူး မာလနျ Malen ရဲ့ နောကျကဂြိုးကွောငျ့ (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ PSV အသငျးအနနေဲ့ အဝေးကှငျးမှာ နိုငျပှဲရခဲ့တဲ့အပွငျ ဂိုးတှလေညျး သှငျးယူခဲ့လို့ ဒုတိယအကြော့ကရြငျ သရေ ဒါမှမဟုတျ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရငျတောငျ ခွစေဈပှဲ အောငျပါပွီ။
အဂေကျြဈအသငျးကလညျး ယူကရိနျးထိပျသီး ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျးကို အိမျကှငျးမှာ (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး ခွစေဈပှဲအောငျဖို့ အခှငျ့အရေးကောငျးတဈခုကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ အဂေကျြဈအသငျးအတှကျ ဂိုးတှကေို Van de Beek ၊ Ziyech ၊ Tadić တို့က သှငျးယူခဲ့ပွီး ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျးရဲ့ ခွစေဈပှဲအောငျမွငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြ ပါးပါးလေးအတှကျ Kędziora က အဝေးဂိုး သှငျးယူခဲ့တာပါ။ ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျးဟာ ခွစေဈပှဲအောငျဖို့ဆိုရငျ အိမျကှငျးမှာ (၂)ဂိုးနဲ့အထကျ သှငျးရမှာဖွဈသလို ဂိုးမပေးရအောငျလညျး ဂရုစိုကျကစားရမှာဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့ပှဲတှမှော AEK အသေငျအသငျး အဝေးကှငျးမှာ နိုငျပှဲရယူခဲ့ပွီး ဘငျဖီကာ၊ ဆာလျဘာ့ဂျ၊ ဒိုငျနမိုဇာဂရကျ အသငျးတို့ကတော့ သရရေလဒျသာ ရရှိခဲ့တယျ။ ခနျြပီယံလိဂျ Play Off ခွစေဈပှဲ ဒုတိယအကြော့ကို သွဂုတျ(၂၈၊ ၂၉)ရကျတှမှော ဆကျကစားကွမှာဖွဈလို့ ဘယျသူတှေ နောကျတဈဆငျ့တကျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
ခနျြပီယံလိဂျ Play Off ခွစေဈပှဲ ရလဒျမြား